एउटा यस्तो तेल छ जुन आज लक्ष्मीपुजामा जलाउनाले माता लक्ष्मी खुशी हुन्छीन् ! « गोर्खाली खबर डटकम
एउटा यस्तो तेल छ जुन आज लक्ष्मीपुजामा जलाउनाले माता लक्ष्मी खुशी हुन्छीन् !
यो पनि :के तपाईं लाई थाहा छ ? मानव स्वा’स्थ्यको लागि स्कुस एउटा बहुउपयोगी तरकारी हो :नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । स’स्तो, स्वादिलो, सुपा’च्य र स्व’स्थ्यकर । स्कुस वहुउपयोगी तर’कारी । स्कुसको मु’न्टा, फल र जरा सबै स्वाद फेर्दै खान सकिन्छ । त्यससँगै स्कुस धेरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले यसले हाम्रो खाद्य भ’ण्डारलाई पनि समृद्ध बनाएको छ । मूख्य कुरा, स्कुस स्वा’स्थ्यका लागि कम्ता पो’षिलो छैन । तरकारी बनाएर खाए हुन्छ, उसिनेर खाए हुन्छ, मःम बनाएर खाए हुन्छ ।
तर यसमा यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ कि स्कुसले मान्छेको क’लेजो स्वा’स्थ्यमा कसरी सहयोग पु¥याउँछ ? ९ स्व’स्थ रूपमा व’जन बढाउन विभिन्न अध्ययनहरूले स्कुस नियमित सेवन गर्नेमा तौल बढ्ने तर यसले मो’टोपनाको कुनै स’मस्या ननिम्त्याउने समेत देखाएको छ । पछि तौ’ल घ’टाउनु पर्ने अवस्था आयो भने पनि सहजै घ’टाउन सक्ने गरी सन्तुलित रूपमा यसले तौला बढाउन मद्धत गर्छ । १०. पा’चन स्वा’स्थ्यलाई सहयोग पु¥याउँछ तपाईंको पा’चन प्रणा’लीमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यमा सहयोग गर्नको लागि स्कुस आफैँमा सहायक सिद्ध खानेकुरा
अनुहारमा चमक ल्याउन देखि क्यान्सरबाट जोगिन यसरी प्रयाेग गर्नुहाेस् अमलाकाे, यस्ता छन् अन्य फाइदा
म्यादी प्रहरीको तलब ३० हजार माथि, १ लाख मात्रै भर्ना लिन अनुमति